Tọrọ atọ na Vietnam: Bamboo Airways na-enweta ndị Europe n'ụlọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Tọrọ atọ na Vietnam: Bamboo Airways na-enweta ndị Europe n'ụlọ
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Czechia • News • Safety • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Na nkwado na Czech Embassy na Vietnam, na 25 Machị, Bamboo Airways na-arụ ọrụ ụgbọelu na-enyere mmadụ aka Hanoi na Prague - isi obodo nke Czech Republic na weghachite Citizensmụ amaala Europe.
N'otu oge, ụgbọ elu ahụ na-ebutakwa ngwongwo enyemaka ahụike nke gọọmentị Vietnamese nyere Czech Republic iji kwado ndị Czech Republic na-ekwu okwu banyere ụkọ akụrụngwa mgbe ọnọdụ Covid-19 na-esiwanye ike.
Gbọ elu ahụ na-apụ 8: 20 am na 25 March site na Noi Bai International Airport - Hanoi na Prague, Czech Republic, bu ndị njem 280 Czech na Europe.
Bamboo Airways na-eji Boeing 787-9 Dreamliner buru ibu rụọ ọrụ ụgbọ elu a pụrụ iche. Dị ka otu n'ime ụgbọ elu nke kachasị ọhụrụ na ezinụlọ 787, Boeing 787-9 Dreamliner nwere ọtụtụ ihe eji eme ọgbara ọhụrụ iji belata ike ọgwụgwụ ndị njem n'oge ụgbọ elu dị ogologo.
Ndị njem chọrọ itinye ụgbọ elu a nwere ike ịkpọtụrụ ndị nnọchi anya Czech Vietnam ozugbo maka nkọwa ndị ọzọ.
Gbọ elu ahụ bụ ụgbọ elu mbụ na-enweghị nkwụsị nke ụgbọ elu ụlọ Vietnamese na Czech Republic ekele na imekọ ihe ọnụ n'etiti Czech Embassy na Vietnam na Achara Airways. Gbọ elu ahụ bara uru karị mgbe ị na-eje ozi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya mgbe ụwa niile na-esonye aka na ọgụ megide Covid-19.
Usoro siri ike iji hụ na nchekwa
Iji belata ihe ize ndụ nke ibute ọrịa, ndị nnọchi anya 'Bamboo Airways' kwuru na ụgbọ elu ahụ na-agbaso ụkpụrụ, nkwenye nke ndị isi ụlọ na ndị mba ọzọ.
Ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị ọrụ ọrụ na ndị ọrụ teknụzụ maka ụgbọ elu a bụ ndị nwere ọmarịcha ọkachamara na ndị ọkachamara pụrụ iche nke ejiri nlezianya họrọ ma zụọ iji hụ na nchekwa ahụike kachasị maka ndị njem na ndị ọrụ.
Linegbọelu ahụ na ndị ọchịchị na-achikwaa ahụike nke ndị njem niile tupu ha abanye.
Mgbe ọ laghachiri Prague, a ga-ekpochapu ụgbọelu na ọdụ ụgbọ elu, ndị njem na ngwongwo ngwongwo dịka ụkpụrụ kachasị elu iji gbochie ihe ize ndụ nke ọrịa nje.
Ike Vietnam - Mmekọrịta Czech
Ọrụ nke ụgbọ elu a na-egosi mgbalị ndị na-eso ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya mba na ndị njem nọ n'ọnọdụ Covid-19. Bamboo Airways na-atụ anya ụgbọ elu ahụ Hanoi - Prague ga-ihe fọrọ-eme ka ike nke Vietnam - Czech Republic mmekọrịta na imekọ ihe ọnụ, ọkachasị na 2020 mgbe mba abụọ ahụ na-eme emume iri asaa nke iguzobe mmekọrịta mba na mba.
Na Bamboo Airways 'atụmatụ nke ịzụlite netwọọdụ ụgbọ elu mba ụwa, Czech Republic burukwa uzo mbu dika “uzo uzo ohuru” kọntinenti a.
Kemgbe afọ gara aga, Bamboo Airways emechara nkwadebe iji rụọ ọrụ ụzọ ahụ Hanoi - Prague site na ugboro abụọ ụgbọ elu kwa izu ma nwee ike ịbawanye dabere na mkpa ndị njem. A na-atụ anya na a ga-etinye ụzọ ụgbọ elu a n'ọrụ mgbe ọnọdụ ahịa kwụsiri ike iji hụ nchekwa nchekwa ahụike kachasị maka ndị njem.